Cishe bonke abashadile, ngezinye izikhathi kukhona ubulili obungavamile ohlangothini, kodwa lokhu kuyinto ehlukile kunomthetho. Ubulili obunjalo buyinto engavamile, futhi cishe njalo ngengozi, ngokuzenzekelayo.
Ngaso sonke isikhathi, amadoda nabesifazane abashadile bafuna ucansi ohlangothini, lapho bengakhululekile, noma benganelisekile ngokocansi emndenini, uma benesikhathi esiningi samahhala, futhi akukho ndawo yokuyibeka. Ikhuthaza ubulili ohlangothini lokuthi omunye wabashadile uvame ukuhamba ngebhizinisi, noma usebenza ebusuku, lapho emndenini iqhubeka ingxabano njalo.
Lapho ehlanganyela ocansini, eshadile, njengaye kanye naye, engozini yokuthi ubuhlobo babo bufundwa ngabashade babo. Ngakolunye uhlangothi, lokhu kuyiphutha, futhi ngakolunye uhlangothi - ingozi, inikeza i-adrenaline ebuhlotsheni babo ohlangothini.
Izinzuzo zocansi nabashadile yizo ezithinta ukusondelana kakhulu, ezimweni eziningi, umlingani kuphela oqinekile. Ebudlelwaneni obunjalo, kunobungozi obuncane bokungabambisani nomlingani wezocansi ngenkathi kupholile ebuhlotsheni, njengoba bobabili abalingani bakhetha ukwenza izivumelwano ezingcono kunomunye umuntu ozokwazi ngobuhlobo babo.
Oshadile kuphela, owesilisa nowesifazane, bayazi ukuthi bahlawulwa ngokweqile emndenini futhi bazama ukulahlekelwa yizo zonke izinhlobo zobulili emsebenzini. Awudingi ukuphoqa owesifazane isikhathi eside futhi ufike ngezizathu ezihlukahlukene. Abesifazane abakwenzi kahle ngokuhluleka ekukhulumeni nasekukhulumisaneni kwezocansi - owesifazane uyabona konke lokhu ngokuqonda futhi yena uhlanganyela ekwenzeni ngcono isimo. Oshadile, indoda nowesifazane, benza lokho abakuthandayo, bazi kahle ukuthi uma behluleka, bayowela ohlelweni olugcwele lwe-cuckold.
Abesifazane abashadile ngeke benze amanga, abaziphatha kahle futhi abahlanzekile, ngoba kusukela ekuqaleni kokubili baqonda ukuthi yini lapha nokuthi kanjani. Ngakho-ke, akudingeki bazikhandle ngokwabo kanye nabalingani babo, balawule ukuziphatha kwabo kanye nokuziphatha komlingani, noma ukuphika noma yini. Banikezwe ngokuphelele enkambisweni enhle kakhulu. Kulokhu, ungakwazi ukujabulela ngokugcwele izikhathi ezingenakulibaleka zothando.
Owesifazane oshadile akanikezwa yena ngokwengeziwe, futhi ufuna, noma cha, ukhokha ngokukhethekile ukuhlanzeka komuntu siqu futhi uyifake ezingeni eliphezulu kakhulu. Iningi labantu abashadile, impilo yabo yezocansi ivikela, futhi kungani kuleli cala alisebenziseli lokhu ngamaphesenti angamakhulu, kanti intsha eningi isayinaki ngenxa yokungabi nokuqonda nokungazi, futhi abalingani babo abaqaphelisanga.
Umlingani oshadile uyazi okuningi ngokuphathelene nokukhulelwa, futhi lokhu kukuvumela ukuba uphumule ngaphambi kokwesaba ukukhulelwa okungalindelekile. Futhi futhi azikho izibopho zomzimba zobulili, izigcawu ezihlukene, ama-hysteric, njll.
Bobabili indoda nowesifazane, abaneminyaka yobudala, baba nobuvila ekufuneni izinjabulo, abalingani abasha, bese ubulili phakathi kwendoda eshadile nomfazi yilokho abakudingayo.
Ngezinye izikhathi, owesifazane oshadile nomfazi, owesifazane uphoqeleka ngenxa yomona wempilo yomndeni ophumelelayo yomngane noma umphathi. Khona-ke lona wesifazane uqala "ukuguqula umsila" ngaphambi komyeni wakhe, akayeki noma yini, ukuze azame nale njabulo kakhulu. Ngaphezu kwalokho, izinduna ezishadile zabesilisa abashadile, cishe ungathathi nhlobo amathuba.
Njengendoda, owesifazane ubungozi impilo encane, ebuhlotsheni obuseduze nomuntu oboshwe. Oshadile, owesilisa nowesifazane basebenzisa izifudumezi, kokubili ngaphambi nangemva, ngokungafani nezintsha, abavame ukuzenza noma kuphi.
Ngokwezinto ezibonakalayo, kusuka kumuntu omncane omamazana, inkosikazi ingaba nenzuzo enkulu, kodwa iyanyamalala ngokushesha njengoba ivela. Enye into amadoda ashadile. Zizinzile kakhulu ebuhlotsheni.
Kodwa ngokuvamile, ngaphambi kokuba uqale inveli ohlangothini - ulinganiselwe kahle, zonke izinzuzo nezingozi!
Ngimiphi imishwana engcono ukuqala ukukhulumisana, ukudlala ngothando?
Ukuncoma kanye nezimpawu zokunaka umkakhe
Intombazane ingangena kanjani ingxoxo nomfana?
Ubuhlobo bothando lobufihlakele
Ukuxhumana okungavamile nomuntu ongaziwayo
Amasu amaqhawe angabesifazane, ngokusho kwamadoda
Izinzuzo zokukolweni okuhlumekile nokuphikisana nokusetshenziswa kwayo
Snack kusuka pepper yesiBulgaria
I-yogurt efriziwe efriziwe
Ukunakekelwa kwezinwele ezimweni zasebusika
U-Julia Vysotskaya ubhale umlayezo wevidiyo kubalandeli
Owesifazane onamandla, umuntu obuthakathaka
UGwen Stefani: indaba yothando
Iphunga likhishwe uju
Kuyingozi ukulahlekelwa isisindo emanzini munye
Yini elindele iTaurus ngo-2014
Izimo ezinomsoco zocansi
Tlola amanothi ngesikhathi sokukhulelwa, amakhambi abantu